Nahazo Fankasitrahana Ihany Ilay Bangladeshita Mpiasan’ny Lalamby Namonjy Lehilahy Iray · Global Voices teny Malagasy
Nahazo Fankasitrahana Ihany Ilay Bangladeshita Mpiasan'ny Lalamby Namonjy Lehilahy Iray
Voadika ny 08 Desambra 2016 10:46 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, 繁體中文, Español, 简体中文, English
Tany Bangladesh, lasa nalaza ny lahatsarin'ny fakantsary fanaraha-maso nahitana mpiasan'ny lalamby namonjy tovolahy iray izay natory teo amin'ny lalamby raha handeha handalo iny ny fiarandalamby . Nampiseho hakingana sy haranita-tsaina ilay mpanavotra, raha namonjy ilay tovolahy tamin'ny fahafatesana.
Mpiasa mpiandry lalamby eo akaikin'ny garan'ny Chashara, lalamby mampitohy an'i Dhaka amin'i Narayanganj i Billal Hossain Mazumder 58 taona. Tamin'ny marainan'ny 21 Novambra 2016, nanofahofa saina i Billal, niezaka ny hampitandrina ireo mpandeha an-tongotra hanalavitra ny lalamby rehefa nandalo ny fiarandalamby izay ho any Dhaka. Tampoka teo, nisy mpandeha an-tongotra 26 taona, Mamun Hossain, natory teo amin'ny lalamby teo anoloan'ilay fiarandalamby mandeha . Nanofahofa hatrany ny saina i Mazumder ary nanapan-kevitra haingana, hitsambikina teo anoloan'ny fiarandalamby mba hisintona an'i Hossain hiala teo. Raha tara kely fotsiny dia mety maty avokoa izy roalahy. Tatỳ aoriana vao fantatra fa nanapa-kevitra ny hamono tena i Hossain, avy any amin'ny tanànakely Masdail ao Chashara , rehefa nifamaly tamin'ny reniny .
Mpitranga eny amin'ny lalamby ao Bangladesh ny lozam-pifamoivoizana, satria tsy misy mpiandry ny 40%-n'ny fiampitana lalamby izay miisa 2500 eo ho eo, ary tsy manaraka ny fitsipika sy ny famantarana ny olona. Tao anatin'ny enin-taona, 152 ny olona maty tamin'ny loza an-dalamby.
Azo sary tamin'ny fakan-tsary fanaraha-maso ilay mpanavotra be herim-po ary nozaraina tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Fiarandalamby ao Bangladesh izany. Tsy ela dia niparitaka be manerana ny sehatra media sosialy isan-karazany ilay lahatsary.
Nilaza ny mpanao gazety Ashif Entaz Rabi fa angamba tsy mahazo sitraka loatra araka izay tokony ho izy tamin'ny asany i Mazumder indrindra araka ny fahitana ny fihetsiny amin'ny fanampiana ny hafa :
Mpiandry lalamby tsindraindray eo amin'ny Lalambin'i Bangladesh i Billal. Manevaheva saina mena rehefa handalo ny fiarandalamby ny asany.
Hatramin'ny taona 1984 izy no nanao io asa io ary nanomboka tamin'ny karama 2.400 BDT isam-bolana ( 94 dolara, araka ny tahan'ny fifanakalozana tamin'ny 1984). Rehefa afaka 32 taona, 7.000 BDT (90 dolara, araka ny tahan'ny fifanakalozana taona 2016) isam-bolana no karama azony. Ahoana no ahafahany manohana ny fianakaviany amin'ity vola kely ity, tsy fantatro.
Oh, ary tsy mbola mpiasa raikitra izy ao anatin'ny 32 taona.
Tao amin'ny Facebook, maniry mba hisian'ny olona maro tahaka an'i Mazumder i Tareq Alam:
Ankehitriny, lasa mahazatra ny mahita ireo mpandalo tsy mandray andraikitra sy manampy ny olona tra-doza eny an-dalana, aleon'izy ireomaka sary na selfies fotsiny. Mahita ohatra tsara tahaka ity famonjena ny hafa ity isika ao amin'ny zava-misy mampalahelo toy izany, izay tokony ho fihetsika mahazatra, ary misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiarahamonina izany.
Nanome voninahitra ihany koa i Salahuddin Ahammad‎:
Tsara sy mahafinaritra kokoa izao tontolo izao noho ny asan'ny olona be herim-po vitsivitsy sy marina. Manaja an'i Billa, mpiandry lalamby, aho noho ny asany mihevitra ny maha-olona.
Niantso fanairana bebe kokoa tokony aseho manoloana ilay lehilahy saika hamono tena i Abu Benin:
Raha misy olona voavonjy amin'ny alalan'ny fahagagana, tokony hamihina azy, hampionona azy, miezaka hanao ny zava-drehetra amim-pitiavana hatrany ny olona eo amin'ny manodidina, toy ny olom-pantany, ny mpitandro filamninana na ny mpamonjy voina. Satria tsy mandray ny fanapahan-kevitra ny hamono tena ny olona iray raha tsy manana olana.
Kanefa hitantsika ao amin'ity lahatsary ity fa nihazakazaka nanatona azy ny polisy ary nanomboka nidaroka azy raha vao voavonjy izy. Niezaka ny hamono tena ilay lehilahy ary moa ve te hanome azy lesona ilay mpitandro ny filaminana amin'ny alalan'ny fidarohana azy?
Manome fanajana an'ilay maherifon'ny lalamby be fanetren-tena nanana fahasahiana hamonjy olona i Bangladesh https://t.co/Qkfh3Yuge5
Nankasitraka ny fihetsik'i Mazumder ampahibemaso ny minisiteran'ny lalamby ao amin'ny firenena , ary nanome azy valisoa toy ny akanjo maro sy lelavola 100.000 BDT (1 275 dolara). Nanome toky an'i Billal ny minisitry ny lalamby fa hiezaka izy ireo hanao azy ho mpiasa raikitra, na fara faharatsiny omena asa ao amin'ny orinasan'ny lalamby, araka ny traikefany, ny iray amin'ireo zanany .